Ngowuphi umzobi oyila iGoogle Doodles? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Nguwuphi umculi oyila iidoodle zikaGoogle?
UPablo Gondar | | Abadlali, Ezahlukeneyo
Nguwuphi umzobi ozoba i Doodle de Uphando? Ngumbuzo kuthi sonke ngaxa lithile ngelixa sisebenzisa esi sikhangeli sizibuze zona ngexesha elithile ebomini bethu. Ngalo lonke ixesha singena Uphando Into yokuqala esiyibonayo ngumfanekiso ophambili apho ilogo yoqobo ye Uphando nge Imifanekiso yazo zonke iintlobo etshintsha ngokuxhomekeke koko kumelwe lolo suku
Sonke siyazibona ezo Doodle yonke imihla kodwa ngaba siyazi ukuba zenziwa ngubani? kukho igcisa emva kwawo wonke loo msebenzi yintoni ecinga entsha Doodle ukusichukumisa xa singena Uphando. Ubuchule be Uphando Ayinayo imida, kwaye nalo mzobi akabonakali nokuba ukusukela ngo-2000 udale imizobo engapheliyo yolonwabo kunye nemifanekiso eqikelelweyo Ukuhamba nelogo Google.
Sonke singene kwi injini yokukhangela Uphando kwaye sonwabile ukubona i umzekeliso ohamba nelogo, indlela eyahlukileyo yokutsala umsebenzisi kuba ukudibanisa ubuchule kunye nolwazi zininzi kakhulu Doodle de Uphando zimele imihla ebalulekileyo yamanani kunye namanani.
1 Ngubani oyila iiGoogle Doodles?
2 Zazalwa nini ii-doodle zikaGoogle?
3 Zingaphi ii-doodles ezikhoyo?
4 Kutheni le nto iiGoogle doodles zisebenza kakhulu?
5 THUMELA IIDODodo ZAKHO KWI-GOOGLE!
Ngubani oyila i Iidodo de Uphando?
Zonke iintlobo ze imihla ebalulekileyo kunye neziganeko eziboniswe ngokomfanekiso ngokudibanisa ilogo Uphando ngemifanekiso yazo zonke iintlobo, ukusukela ngoku kutshanje nge imidlalo yevidiyo kunye neevidiyo. Uphando Ngaphandle kwamathandabuzo ubuvulindlela kunye nobuchule bokuyila, kodwa ngubani oxhasa le mizobo mihle? ngasemva kwawo wonke lo msebenzi ligcisa uDennis Hwang, eli gcisa lithatha inxaxheba yaqala ukwenza eyokuqala Doodle for Uphando enegalelo ekucingeni kwakhe kuye ngamnye kubo. Namhlanje, ngokukhula okuhluphekileyo kwinkampani, lo msebenzi uyenziwa Iqela lababonisi ubizile iidoodlers.
Zazalwa nini ii-doodle zikaGoogle?
Los Doodle de Uphando beze "bedlala" Abaseki be Uphando baqala ukudlala ngonyaka ka-1998 ne logo yequmrhu ukongeza unodoli emva kwe "o" yesibini yelogo. Kwiminyaka emibini kamva ngo-2000 Bacele umzobi uDennis Hwang ukuba enze imizekeliso yokuhamba nelogo. Okwangoku Doodle de Uphando zenziwe yi Umsebenzi weqela apho iqela labantu lithatha isigqibo sokuba yeyiphi imisitho emele imelwe ngumzobo. Oko kwaqala njengento encinci kakhulu eyenziwe ngumntu omnye kuye kwaba yinto enkulu eyenziwe yiyo yonke into iqela leengcali zokuyila.
Kule vidiyo sinokubona umzobi UDennis Hwang wenza enye yeefayile ze- Doodle de Google. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngumsebenzi omangalisayo kunye nokunethezeka kuthi abasebenzisi ukuze sikwazi ukubona ukuba isebenza njani le ngcali yoyilo.
Zingaphi diioodles zikhona?
Emva kweminyaka emininzi yokusebenza kuqhelekile ukuba ube nohlobo oluthile lwe Doodle pero Ngaba uyazi ukuba zingaphi izinto ezenziwe emva kokusekwa kwayo ngo-2000 kude kube ngoku? ikholelwe okanye hayi ngoku kukho inani lilonke 2000 imizobo, Iindlela ze-2ooo zokumela izehlo ezibalulekileyo ngomzekeliso, ngokuqinisekileyo ngumsebenzi wobugcisa omangalisayo
Ukuba unomdla malunga Doodle yomzekeliso noyilo awunakuphosa igalari yakho ye Uphando apho ungabona khona konke Doodle yenziwe kwasekuqaleni kwenkampani kude kube ngoku. Igalari ine injini yokukhangela apho ujonga khona Doodle ngendlela enocwangco nge imihla ebalulekileyo okanye iziganeko.
Xa singena kwigalari kwaye ucofe u udoti sinokufikelela kulwazi olunomdla ngakumbi malunga naloo nto udoti ikhonkrithi kunye nomsitho owumeleyo. Inomdla kuba singazazisa ngazo zonke iintlobo zezinto kwangaxeshanye sonwabela ukubona umsebenzi wobugcisa oyile kakhulu.
Kutheni le nto iiGoogle doodles zisebenza kakhulu?
Los Doodle de Uphando basebenza kakhulu kuba kwelinye icala zinomtsalane ngokubonakalayo ukufumana umsebenzisi ukuba onwabele ukuyibona naxa Nxibelelana naye ngomdlalo omncinci, kwelinye icala sifumana icandelo elinolwazi apho umsebenzisi ufumana ulwazi malunga nomsitho obalulekileyo.
Ukuba thina njengabasebenzisi sijamelene ne udoti de Uphando esixelela ngokucacileyo malunga nesihloko esinomdla kuthi siya kutsala umdla kwaye sifuna ukwazi ngakumbi ngalo mbandela.
Kulo udoti Le nto siyibona ingezantsi isibonise Usuku lonyulo eSpain ngendlela elungileyo kwaye kumnandi udlala neeleta zelogo, Kule meko inqanaba lokuqhelaniswa (ubunyani) boonobumba liphantsi kodwa nangona kunjalo sinomdla wokuba imalunga Uphando ukubona iinkcukacha ezincinci zeeleta kunye nemibala yazo.
Ngokufika kwamaxesha amatsha ukubaluleka kwamava omsebenzisi nokusebenzisana Uphando Ndicebisa ngeendlela ezintsha zokubonisa Doodle. Namhlanje sinokufumana Doodle Ukuhamba (ividiyo) kunye nokunxibelelana nayo imidlalo emincinci apho umsebenzisi athatha inxaxheba, baninzi abasebenzisi abachithe iiyure bedlala enye yeemidlalo /Doodle ecetywayo ngu Google.
Sinokubona ividiyo encinci kunye nezinye Doodle opopayi de Google.
Ukuzimisela Doodle de Uphando zibangele uburharha kangangokuba abanye YouTube benze iividiyo ukudlala enye yezi imizobo Google.
Thumela i-YAKHO IINKCUKACHA A UPHANDO !
Ngaba uyayazi loo nto unako Thumela eyakho Doodle a Uphando? Ukuba ungumculi okanye umyili kwaye ungathanda inxaxheba kwesi sicelo Uphando Into ekufuneka uyenzile kuku Thumela i-imeyile kuyilo lwakho udoti. Khumbula ukukhankanya kwaye ucacise udoti ukuze into emelwe sisindululo sakho iqondwe. Umnqweno omhle!. Thumela izindululo zakho kule dilesi: proposals@google.com
Akuthandabuzeki Uphando uphawule ngaphambi nasemva kwi-Intanethi omabini kwinqanaba le-IT, kunye nokuyila kunye nokuyila. Kuyahenda khawufane ucinge zonke izimanga ezitsha izinto esizilungiselele zona Google. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga Uphando uyayibona lento Uxwebhu oluncinci malunga nendlela abasebenzi be Google.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Nguwuphi umculi oyila iidoodle zikaGoogle?
Izixhobo zombala wonke umyili olungileyo kufuneka abe nazo
Uyenza njani isiphumo se "Andy Warhol"